Netizen Report: Inona no iombonan’i Pakistan sy Rosia? Mandràra ny Telegram izy ireo. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2018 9:02 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Français, Magyar, Nederlands, ਪੰਜਾਬੀ, 繁體中文, Português, English
Sary avy amin'i Christian Wiediger tao amin'ny Unsplash. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Amin'ny fampandrosoana mampiahiahy ho an'ny ho avin'ny fampiharana finday voaafen-tsoratra, nakaton’ i Iran sy Rosia ny tolotra fandefasan-kafatra Telegram tao anatin'ny herinandro mielanelana tamin'ny volana Aprily.
Nanambara ny fandraràna ny Fitsarana Moskoa tamin'ny 13 aprily taorian'ny nadavan'ny tale jeneralin'ny Telegram hatrany tsy hanaraka ny fangatahana hanome alalana ny mpampihatra lalàna hiditra amin'ny fanalahidin'ny fanafenan-tsoratra amin'ny fampiharana.
Saingy mora lazaina fa sarotra tanterahina ny fametrahana ny fandraràna. Taorian'ny nandidian'ny Roskomnadzor, mpandrindra ny haino aman-jery federaly ao amin'ny firenena, ny mpamatsy tolotra aterineto Rosiana mba tsy ahafahan'ny mpiserasera miditra amin'ny adiresy IP an'ny Telegram, niova nampiasa ny tolotra fiaingana cloud ny orinasa.
Nanomboka nandràra adiresy IP an-tapitrisany avy eo ny Roskomnadzor tamin'ny fikasana hanakatona ny tolotra – nanakana ireo tranonkalan'ny orinasa sy ny sehatra fifandraisana hafa, anisan'izany ny Viber, Slack, ary Evernote izany.
Fotoana fohy taty aoriana, namoaka didy hanakatona ny Telegram ny fitsarana Iraniana, mangataka amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto mba hiantoka ny tsy fahafahana miditra amin'izany rehefa mampiasa fitaovana fanivahana.
Nilaza ny manampahefana fa noho ny fiarovam-pirenena no nahatonga ny fanapahan-keviny handrara ny fampiharana, izay nosivanina nandritra ny hetsi-panoherana ny governemanta tamin'ny volana desambra 2017 sy ny volana Janoary 2018.
Hatramin'ny nampiharana ny didy, nitatitra ihany koa ny Iraniana fa nahatsapa fihenana tamin'ny fifamoivoizan'ny tahiry afenin-tsoratra ary nisedra olana izay rehetra miezaka miditra amin'ny sehatra hafa toy ny Apple App sy ny WhatsApp.
Tsy vao voalohany ny firenena no nanakana ny Telegram. Nanakatona ny Telegram tamin'ny tambajotram-pifandraisan-davitra rehetra i Pakistan tamin'ny Novambra 2017 taorinan'ny baikon'ny Fahefana misahana ny Fifandraisandavitra ao Pakistan.
Tsy mbola nanome antony mazava nahatonga ny fandraràna ny sampan-draharaha, na dia nanombatombana aza ny sasany fa mety misy ifandraisany amin'ny fanafenan-tsoratra Telegram izany, izay nilazan'ny tale jeneralin'ny orinasa, Pavel Durov fa tsy hanaiky hifampiraharaha.
Ary Indonezia koa ny nanakana ny fidirana amin'ny tolotra fandefasan-kafatra tamin'ny taona 2017 noho ny ahiahy fa nampiasaina hanapariahana “fampielezan-kevitra fampihorohoroana” izany. Ho setrin'izany, nampanantena i Durov tamin'izany fotoana izany fa handray fepetra haingana mba hanakatona ireo fantsona ho an'ny daholobe ka ahitana “votoaty mifandraika amin'ny mpampihorohoro.”
Tompony vaovao, zava-dratsy ho an'ny tranonkalam-baovao tsy miankina farany ao Kambodza
Lehibe dia lehibe ny ahiahy momba ny fahaleovan-tenan'ny famoahan-dahatsoratra ao amin'ny Phnom Penh Post ao Kambodza taorian'ny namarotana azy taminà talen'ny orinasa Maleziana momba ny seraseram-bahoaka. Voaraoka ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra, Kay Kimsong rehefa tsy nety namafa lahatsoratra momba ny fifandraisana misy eo amin'ny tompon'ny tranonkala vaovao sy ny Praiminisitra Kambodziana Hun Sen. Taorian'ny fandroahana an'i Kimsong, tonian-dahatsoratra sy mpiasa mpanangom-baovao maromaro ihany koa avy eo no nametram-pialàna ho fanoherana ny fandroahana an'i Kimsong.
Milaza ireo mpiaro ny fahalalahan'ny media fa mikendry ireo mpanao gazety Palestiniana i Israely
Hatramin'ny nanombohan'ny hetsi-panoherana tao Gaza tamin'ny 30 martsa, notafihan'ny tafika Israeliana ireo mpanao gazety teny an-tsehatra. Mpanao gazety Palestiniana roa, Yasser Murtaja sy Ahmed Abu Hussein, no maty, na dia nanao fitaovana hamarantana azy ireo fa mpanao gazety aza. Voatifitra teo amin'ny kibony ilay mpanao gazety mpaka sary Yaser Qudeih ka mbola atahorana ny ainy. Maro hafa kosa no naratra, tratran'ny bala tena izy, bala fingotra sy etona simika. Nangataka ny Fitsarana Iraisam-pirenena misahana ny Heloka bevava mba hanadihady ny raharaha ny Reporters Sans Frontières.
Tsy misy mpanao gazety any am-ponja intsony ao Ozbekistan
Tamin'ny fanapahan-kevitra nankasitrahan'reo mpiaro ny zon'olombelona, ​​namoaka an'i Bobomurod Abdulloev sy Hayot Nasriddinov, mpanao gazety roa nogadraina tamin'ny faramparan'ny taona 2017 noho ny “hetsika manohitra ny lalàmpanorenana” i Ouzbékistan. Sambany tao anatin'ny roapolo taona farany, tsy nisy mpanao gazety nigadra tany Ozbekistan, izay nalaza ho fitondrana didy jadona indrindra manerantany taloha.
Mitaraina noho ny fikorontanan'ny fifandraisana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra an'i Putin
Nitatitra ireo mpikatroka manohitra ny fe-potoana fahaefatra hitondran'i Vladimir Putin ho filoham-pirenena fa fanahy iniana nosimbain'ireo mpandraharahan'ny fifandraisandavitra ny tambajotra findain'izy ireo. Ny hafa kosa nitatitra fa voafafa ny nomeraon-telefaon'izy ireo noho ny fangatahan'ny manampahefan'ny fampiharana ny lalàna. Nandà ho tsy namafa laharana an-tariby ny iray tamin'ireo orinasa, Beeline ary nilaza fa noho ny fitohanana be loatra no mahatonga ny fikorontanan'ny tambajotra.
Mpamokatra horonantsary Indiana voasambotra noho ny sioka “tsy manaja” ny praiminisitra
Nametraka fitoriana an'ilay mpamokatra horonantsary Ram Subramanian ny mpitandro filaminana ao Mumbai noho ny sioka voalaza fa manaratsy ny praiminisitra Narendra Modi sy ny reniny tamin'ny Fetin'ny Reny. Naaton'ny Twitter vonjimaika avy eo ny kaontin'i Subramaniana fotoany fohy taorian'ny “fandikàna ny fitsipiky nyTwitter.”
Milaza ny antsipirihan'ny fampiharana ny fenitra ara-piarahamonina ny Facebook
Sambany ny Facebook namoaka tatitra mangarahara momba ny fomba itondrany ny votoaty izay manitsakitsaka ny fenitra ara-piarahamonina. Araka ny tatitra, ny ankamaroan'ny lahatsoratra nesorin'ny orinasa nandritra ireo telo volana voalohan'ny taona 2018 dia “spam” na avy amin'ny kaonty sandoka, raha 21 tapitrisa kosa no nesorina noho ny fampisehoana sarin’ olon-dehibe mamoafady sy ny resaka firaisana ara-nofo, 3,5 tapitrisa kosa no nesorina na nomena fampitandremana noho ny fampisehoana herisetra, ary 2,5 tapitrisa nofafana noho ny kabary feno fankahalana. Na dia milaza aza ny orinasa fa mampiasa teknika mandeha ho azy izy mba hamantarana izay sary mamoafady sy votoaty mampihoro-koditra, “mbola tsy miasa tsara” ho an'ny kabary fankahalàna ilay teknolojia.
Antontan-taratasy tafaporitsaka manazava ny politikan'ny fahalalana onony amin'ny votoaty an'ny Instagram
Manazava ny fomba fitantanan'ny Instagram votoaty ny antontan-taratasy azon'ny Motherboard, izay manambara fa ny orinasa izay ny Facebook no tompony dia hanafoana kaonty raha toa ka manitsakitsaka ny politikan'ny tranonkala ny roa na ny ampahan'ny maro amin'ny sarintava, na raha mihoatra ny 30 isanjaton'ny median'ny kaonty no manitsakitsaka ny politikan'ny tranonkala, na raha misy ampahany amin'ny sary famantarana manitsakitsaka ny politikan'ny Instagram momba ny fivarotana zava-mahadomelina, sary mamoafady, fisarihana firaisana ara-nofo, famonoan-tena na fandratran-tena, na fampihorohoroana. Asaina ireo mpandrindra mba hanarana ny dingana “fanamarinana miandalana”amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny anarana, ny mombamomba sy ny sary, ny media, ary ny fanehoan-kevitra.
Milaza ireo mpiasan'ny Google fa “tsy tokony ho ao anatin'ny lalam-pihariana ady” ny goavan'ny teknolojia
Maherin'ny 3 100 ireo mpiasan'ny Google nanasonia taratasy ho fanoherana ny fandraisan'anjaran'ny orinasa amin'ny Tetikasa Maven, tetikasa vatsian'ny Departemantam-piarovana Amerikana ara-bola mba hanatsarana izay kendren'ny daroka drôna amin'ny alalan'ny fahaizana artifisialy. Nandrisika ny talen'ny Google mba hanohana ny fifanarahana iraisam-pirenena mandràra ny rafitra fitaovam-piadiana mahaleotena ny taratasy faharoa nosoniavin'ny mpikaroka maherin'ny 700.
Manasongadina ny adihevitra fanafenan-tsoratra – The Citizen Lab
Shining a Light on the Encryption Debate – The Citizen Lab
Misorata anarana hanaraka ny the Netizen Report
Afef Abrougui, Mahsa Alimardani, Eduardo Avila, Ellery Roberts Biddle, Rezwan Islam, sy Sarah Myers West no niara-nanoratra ny lahatsoratra.